ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား)| January 31, 2013 | Hits:27,265
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment မြန်မာပြည်သား January 31, 2013 - 11:19 pm	၂၀၁၃ခုနှစ် တွင် ဗမာ့ တပ်မတော် အလံ ကို နိုင်ငံတော် အလံပြောင်းကာ ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်၍ ဗမာ့တပ်မတော် ကဲ့သို့ မညစ်ပတ် မိစေရန် အားကစား သမားများ သတိထားသင့်ပါကြောင်း. လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။